Mogadishu Journal » Munaasabad casho sharaf ah oo xalay loogu sameeyay madaxtooyada wafdigii maamulka Jubba ee shalay gaaray Muqdisho
Mjournal: — Waxaa maalintii shalay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya gaaray wafdi ballaaran ka yimid magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose,, waxaana wafdigaa horkacayay hogaamiyaha maamulka Jubba Axmed Max’ed Islaam [Axmed Madoobe]
Hadaba wafdiga oo xalay ku hooyday magaalada Muqdisho ayaa waxaa halkaa loogu sameeyay munaasabad casho sharaf ah oo ay ka soo qeyb-galleen mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
C/llaahi Ciilmooge Xirsi wasiirrka warfaafinta oo ka hadllay munasabada ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan wafdiga Axmed Madoobe, isagoo xusay in kulankan uu yahay mid muhiim ah oo aanay ajaaniib ku kala dhex jirin labada dhinac.
”Runtii kulan wanaagsan, oo annaga Soomaali ah islamarkaana ajnabi nagu dhax jirin aan ku waa hadlleyno, waa kulan qiimo badan runtii, ayuu yiri wasiirrka warfaafinta xukuumada Soomaaliya.
Axmed Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubbaland oo isna ka hadllay kulanka cashada ah ayaa muujiyay dareenkiisa ku aadan sida loogu soo dhaweeyay Muqdisho iyo munaasabada casho sharafta ah ee uu ka qeyb-gallayo.
”Umaleyn mayo anniga dhaceyga in caawa habeen ii wanaagsan ay jirto, maxaa yeellay waxaan halkan wada joogaa oo aan munaasabada ku wada casheyneynaa madaxdii Soomaaliya, taa anniga siweyn ayeey ii farxad galineysaa,” ayuu yiri Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe ayaa shalay markii uu gaaray magaalada Muqdisho sheegay in uu u tagay halkaa sidii loo laabi lahaa boogii khilaafka Jubbooyinka ee sida uu sheegay ka furnaa magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo ugu danbeytii ka hadllay casho sharafta ayaa sheegay in ay siweyn u soo dhaweynayaan wafdiga ka yimid Jubbooyinka ee uu horkacayo Axmed Madoobe, isagoo ku tilmaamayimaantinkooda Muqdisho in uu muhiim u yahay guud ahaan Soomaaliya.
“Soomaalida waxay dhahdaa labo dhaxal isku heysato hadii la arki maxaa isku tihiin lama yiraahdo, waxaa nahay dad wax ka dhaxeeyaan, dad aan waxba ka dhaxeyn isma qabsadaan oo colaad kama dhex dhici laheyn”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa waxaa soo dhamaaday khilaaf mudo dheer u dhaxeeyay kadib wada hadal ku dhaxmaray labada dhinac dalka Itoobiya.
Ugu dambeyn Madaxweynaha ayaa sheegay in ay balan qaadayaan sidii ay u dhaqan- gelin lahaayeen Heshiiska Addis Ababa, isla markaana inta dhiman loo dhameystiri lahaa.